जीवनी एनरिक इग्लेसियस - ल्याटिन अमेरिकी तारा
गायक एनरिक इग्लेसियस - Incendiary ल्याटिन अमेरिकी तारा। यो विश्वव्यापी ख्याति र लोकप्रियता छ। जीवनी एनरिक इग्लेसियस यस लेखमा पवित्र हुनेछ।
Enrique मैड्रिड को जन्म ठाउ थियो। मे 8, 1975 प्रसिद्ध स्पेनिश गायक जुलियो इग्लेसियस र प्रस्तोता इसाबेल Preisler आमाबाबुले भयो। तर आफ्नो वैवाहिक लामो पछिल्लो गर्न थियो। एनरिक तीन वर्षको हुँदा, तिनीहरूले छोडपत्र। केही वर्ष उहाँ र उहाँका भाइ र बहिनी जुलियो अमेरिका सारियो गर्दा, उनको आमा संग बस्थे। तर चाँडै, छोराछोरीलाई आफ्नो बुबाको साथ बन्द राम्रो हुनेछ भन्ने इसाबेल बुझे, र 1985 मा तिनीहरूले मियामी सारियो। Enrique एक प्रतिष्ठित विद्यालय उपस्थित। उहाँले एकदम बिट थियो मित्र गर्दा केटा लजाउने र नम्रता भिन्नता देखि।
जीवनी एनरिक इग्लेसियस कम उज्ज्वल हुन र त्यो एक गायक बन्न बाल्यकाल देखि प्रयास थियो भने छैन, प्रशंसक को लाखौं रुचि छ सकिएन। यो विचार आफ्नो बुबा रुचि थिएन। जुलियो आफ्नो छोरा एक व्यापारीले छ कि आशा, र व्यापार को संकाय मा विश्वविद्यालय दिनुभयो थियो। पनि साथ 16 एनरिक को वर्ष आफ्नो भविष्य गीतहरू लागि कविता लेखे, र प्रशिक्षण समयमा विभिन्न स्टूडियो मा आफ्नो नोट पठाएको, तर अस्वीकार भएको थियो, र छवि परिवर्तन गर्न आग्रह गरे।
जुलियो इग्लेसियस - उहाँले मेक्सिको FonoMusic मा एक प्रसिद्ध लेबल संग एक सम्झौता मा प्रवेश र आफ्नो पिता को लागि धेरै निराशा छ जो स्कूल, बाहिर ड्रप जब तारकीय जीवनी एनरिक इग्लेसियस, 1994 मा सुरु हुन्छ। पहिलो एल्बम मा काम क्यानाडा मा खर्च starlet जो पाँच महिना लागि गयो। लगभग तुरुन्त इग्लेसियस जूनियर इटाली, पोर्चुगल र स्पेन बोले बारेमा पछि यसको रिलिज पछि। 1997 मा तिनीहरूले एल्बम जारी, र एनरिक को "Vivir यात्रा" भ्रमण जान्छ। उहाँले 78 संगीत प्ले र अर्को वर्षको लागि यसको प्रशंसक नयाँ, तेस्रो, एल्बम, "Cosas डेल Amor" हकदार खुसी छ।
महिमा को शीर्ष
1999 मा, गीत "Bailamos", फिल्म "जंगली जंगली पश्चिम" को लागि विशेष लिखित अमेरिकी चार्ट को पहिलो लाइन हो। ज्ञात संगीत लेबल अनुबंध इग्लेसियस प्रस्ताव गर्न थाले। स्पेनिस गीतहरू - Interscope रेकर्ड संग, त्यो, र साथ विश्वव्यापी संगीत ल्याटिनो अंग्रेजी-भाषा परियोजनाहरू लेखन, collaborated। Enrique "एकपटक मेक्सिकोमा एक समय माथि" फिल्म तारा अङ्कित, Pepsi विज्ञापनहरु भाग लिए र धेरै एल्बम जारी।
सबैभन्दा इग्लेसियस जूनियर अनुसार, आफ्नो बुबा "चाटुकर" को रूपमा जानिन्छ महिमा आफ्नो लिङ्कमा थियो। प्राण जोडीलाई त्यो भिडियो उसलाई रूसी टेनिस खेलाडी खिच्नुभयो थियो "भाग", को फिलिम समयमा भेट अन्ना kournikova। आफ्नो सम्बन्ध एनरिक थप एक हप्ता भन्दा बालिका अघि भेटे भन्ने तथ्यलाई बावजुद 10 भन्दा बढी वर्ष लामो समयसम्म रह्यो। समय समयमा, प्रेस प्रेमको आगामी विवाहबारे प्रशंसक जानकारी, तर एनरिक इग्लेसियस जसको जीवनी यस लेखमा छलफल गरिएको छ, र kournikova यो जानकारी अस्वीकार। मिति गर्न, ल्याटिन गायक सक्रिय जान्छ सामाजिक जीवन , र आफ्नो धेरै प्रशंसक delighting, एल्बम रेकर्ड गर्न जारी छ। जीवनी एनरिक इग्लेसियस छोरा पुग्यो जो लोकप्रियता बारे आफ्नो बुबा, मात्र आफ्नो वर्ष मा सपना सक्छ किनभने पनि रोचक छ।
Oleg Mityaev: जीवनी, फोटो, व्यक्तिगत जीवन
Bjork, गायक: जीवनी, पेसा र परिवार
जब तिमोथी छोरी जन्मिएको थियो र उनको नाम के हो?
WWII को Partisans - यी एक राजधानी पत्र संग गर्दै छन् मान्छे
दबाइ 'जिंक मलम': प्रयोग, संरचना र contraindications लागि निर्देशन
Bukhara (उज्बेकिस्तान) - दन्तिये शहर
कुन अर्थमा चितुवा टाटु गर्छ?
गेम कन्सोल "Dandy": समीक्षा र विवरण